Kooxaha Tottenham iyo Chelsea ayaa caawa ku balansan kulan ka tirsan wareega 16ka ee Carabao Cup iyadoo Mourinho uu ka horimaanaya ardaygiisii hore Frank Lampard oo hogaaminaya Blues.
Kulankaan ayaa ka dhacay garoonka Tottenham Hotspur Stadium iyadoo labada kooxood ay u tartamayaan inay u soo gudbaan wareega 8da ee koobka Carabao Cup.
Tababare Frank Lampard ayaa soo safay markii ugu horeysay goolhayaha cusub Mendy kaasoo isbuucii la soo dhaafay ka soo wareegay kooxda Faransiiska ee Rennes halka Kepa uu fadhiyo kursiga keydka.
Sidoo kale waxaa booska daafaca bidix lagu soo bilaabay markii ugu horeysay Chilwell ka dib markii uu bedel ku soo galay kulankii wareega 3aad ee Barnsley iyadoo daafac dhexe ay ka ciyaarayaan Zouma iyo Tomori halka Thiago Silva gabi ahaanba laga soo tagay.
Weerarka waxaa hogaaminaya Giroud iyadoo ay caawinayaa Timo Werner iyo Mason Mount halka khadka dhexe ay soo safteen Hudson-Odoi, Jorginho iyo Kovacic iyadoo Kante uu kursiga keydka fadhiyo, waxaa sidoo kale keydka fadhiya saxiixa cusub Havertz iyo weeraryahan Abraham.
Dhanka kale tababare Jose Mourinho ayaa kulankiisii ugu horeysay caawa ciyaarsiinaya saxiixa cusub Sergio Reguilon, iyadoo tababaraha reer Portugal uu isbedelo badan ku sameeyay shaxdiisii kulankii ay barbaraha 1-1 la galeen kooxda Newcastle.
Kaliya goolhaye Hugo Lloris iyo daafaca Eric Dier ayaa ah labada xiddig ee kaliya ceshtay booskoosa halka ay u muuqato in Mourinho uu ciyaarayo shax ciyaareedka 3-5-2.
Keyd: Kepa, James, Emerson, Kante, Barkley, Havertz, Abraham
Tottenham: Lloris, Alderweireld, Dier, Tanganga, Aurier, Gedson, Ndombele, Sissoko, Reguilon, Bergwijn, Lamela
Keyd: Hart, Doherty, Sanchez, Davies, Hojbjerg, Lucas, Kane